Tantaran'ny Casinos Online - webboard.sesao33.net
Tantaran'ny Casinos Online
โพสต์: # 280889โพสต์ Yortvandy8899
ศุกร์ 07 ก.พ. 2020 5:05 pm
Nisokatra ny casino an-tserasera voalohany tamin'ny 1996 ary mbola eo an-toerana ankehitriny. Raha ny marina dia misy casinos maromaro nanokatra ny taona vitsivitsy voalohany nidiran'ny filokana tamin'ny Internet (ary an-jatony maro), no nanjary iray amin'ireo indostrian'ny Internet nahomby indrindra. Saingy tsy fahombiazana sy lalana mora foana ho an'ny indostrian'ny Internet an-tserasera, araka ny ho hitanao tsy ho ela. paoypaet.com
Na dia talohan'ny nanokafan'ny InterCasino ny varavarana virtoaly tamin'ny 1996, dia nisy ny fanoherana. Ny mpanao lalàna sy ny antokon'ny mpitsikilo dia nilahatra naka ny tifitra azony tamin'ny fisokafan'ny kasino an-tserasera ho avy. Fa raha vao nandalo ny "Trade Trade and Processing Zone Act" ny Vaomiera Ambony ao Antigua sy Barbuda ao amin'ny West Indies, dia natao ny hanamboarana ny tantaran'ny casino an-tserasera. Nanomboka ny Division of Gaming izy ireo mba hanome ny fahazoan-dàlana ofisialy voalohany momba ny fizarana ka ahafahan'ny mpandraharaha afaka manokatra ara-dalàna ny casino online. Satria nandà ny tsy hanome ireo lisansa ireo i Etazonia sy ireo firenena lehibe hafa, ity dia ampahany lehibe amin'ny tantaran'ny casino an-tserasera.
Soa ihany nanomboka teo, sehatra ara-dalàna maro hafa no nanomboka namoaka lisansa manerana an'izao tontolo izao, anisan'izany Canada, UK sy ny maro hafa. Saingy tsy nijanona kely tao Etazonia io lisitra io, izay mbola mijanona tsy mahatakatra fahazoan-dàlana ihany.
Ny casinos an-tserasera voalohany dia nihaona tamin'ny fisalasalana be dia be, satria ny fahazoana ny vaovao toy ny carte de crédit, ny anarana sy ny adiresy amin'ny Internet dia mbola miahiahy be ihany. Ny casinos an-tserasera dia noheverina fa mangingina na itondran'ny andian'olona. Ny fifandraisana miadana dia midika fandaharana sy fakana sary mihetsika ary tsy fisian'ny mpamatsy rindrambaiko kalitao ao amin'ny indostrian'ny fikorotanan-javatra dia midika fa sehatra goavambe.